Fihaonambe isan-taona an'ny PJSA & WIPCS: FAHASALAMANA, FITSARANA, ary FANDAMINANA - Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
Fihaonambe isan-taona an'ny PJSA & WIPCS: FAHASALAMANA, FIAROVANA, ary FIADANANA FIADANANA
Oktobra 7 - Oktobra 10
« Fampiofanana MPI 2021 Virtual Peacebuilding - Fanabeazana ny fandriam-pahalemana: famolavolana pedagogies ho an'ny fanovana
Paulo Freire sy ny fahaveloman'ny olona tamin'ny taonjato faha-roapolo (andiany webinar) »
Mamorona vondrom-piarahamonina salama sy miray
Fihaonambe isan-taona an'ny Fikambanan'ny Fikarohana momba ny fandriam-pahalemana sy ny fahamarinana (PJSA) & Ny Wisconsin Institute for Peace and Conflict Studies (WIPCS).
Hosted by: Fandaharam-pandrosoana fandriampahalemana sy ny oniversite ny mpitsabo mpanampy ao amin'ny University of Wisconsin - Milwaukee
7-10 OKTOBRA 2021
Milwaukee, Wisconsin, Etazonia
Daty fanaterana ny soso-kevitra: Enga anie 01, 2021
Navoaka ny volavolan-drafitra: Jona 4, 2021
Fisoratana anarana vorona voalohany: Jolay 15, 2021
Ny lohahevitry ny kaonferansa PJSA / WIPCS amin'ity taona ity dia manolotra ny fotoana hijerena ireo fihaonan-dohan'ny fahasalamana, ny hitsiny, ny fahamarinana ary ny fandriampahalemana. Ny fakan'ny fahasamihafana eo amin'ny fahasalamana dia miitatra tamin'ny tantara tamin'ny fanjanahantany ary naseho COVID19 indray. Ny fahantran'ny krizy farany teo dia manome fotoana lehibe iray hijerena ny halalin'ny ambaratongam-pahasalamana. Ny tena zava-dehibe dia manome hery antsika amin'ny fanekena ny filàna fanovana maika koa. Amin'ny alàlan'ny taratasy, plenary ary fampisehoana, dia hizaha ireo sakana lehibe sy fotoana hiresahana ireo krizy ara-pahasalamam-bahoaka toy ny fanavakavaham-bolon-koditra, tsy fitoviana ara-toekarena, ny famaritana ara-tsosialy, ary ny herisetra eo amin'ny samy lahy sy vavy ary ireo ohatra tsy fitoviana eo amin'ny rafitra. Ny ivon'ny dinidinika ataontsika dia ny hetahetan'ny fanovana vaovao sy ny ivon'ny feo voahilika sy nangina.
Miantso ny halaliny sy ny sakan'ny vatsim-pianarana fandriampahalemana eo amin'ny sehatry ny fandriam-pahalemana sy ny fomba famahana ny fifanolanana hita taratra ao amin'ny maha-mpikambana PJSA sy WIPCS, ity fihaonambe ity dia mikendry ny hifanakalo hevitra bebe kokoa, hanetsika ny paikady ary hampiorina ireo fomba fijery vaovao sy fomba fanao izay manome hery ny fanovana eran-tany amin'ny alàlan'ny hetsika mifandraika. Entanina ireo mpandray anjara mba hametraka ny anjara birikiny tamin'ilay kaonferansa tamin'ny fomba izay manazava ny dinamikan'ny fikorontanana ara-tsosialy sy ny tantaram-piainana revolisionera.
Ny fihaonambe dia fiaraha-miasa eo amin'ny PJSA (Etazonia sy Kanada) sy WIPCS (Wisconsin), fikambanana isam-paritra izay mampivondrona ny mpampianatra sy ny mpikaroka momba ny fandriampahalemana / fifandirana hiadian-kevitra momba ny pedagogy, ny fikarohana ary ny fampiharana. Hisy fotoana maro hifaneraserana, manomboka amin'ny fandaharam-pifanarahana mialoha ny fihaonambe, ary koa ny takelaka, ny plenary, ny atrikasa ary ny foto-kevitry ny fifanakalozan-kevitra, ary hofaranana amin'ny lanonana fankalazana isan-taona antsika sy ny lavanty mangina.
Fikambanana fandinihana fandriam-pahalemana sy fahamarinana
Milwaukee, WI 53211 Etazonia + Google Map
Jereo ny tranokala Venue